Shwenadi web links collection (for computer)
Website ပေါင်း ၁၃၄ ခုဖြင့် ရေးဆွဲထားသော shwenadi web link collection for computer ဟာ ကိုယ်လိုချင်တဲ့ ဆိုဒ်တွေရဲ့နာမည်ကို ကလစ်တချက်နှိပ်ရုံဖြင့် မိမိသုံးနေကျ browser နဲ့ ပွင့်လာမှာဖြစ်ပါတယ် အလွယ်တကူနဲ့ပေါ့ပေါ့ပါးပါးအသုံးပြုနိုင်အောင် ဖန်တီးထားတဲ့ ဒီဆော့ဖ်ဝဲလေးရဲ့ဆိုဒ်က 5mb ကျော်ကျော်လေးပဲရှိပါတယ် ရသစုံအောင် ကဏ္ဍတွေလဲခွဲပေးထားပါသေးတယ် ၁၃၄ ခုသော website တွေဆီကို Shwenadi technology ကထုတ်တဲ့ Shwenadi web links collection နဲ့ အလည်သွားလိုက်ကြရအောင်နော်
အောက်ကလင့်ခ်မှာ download ရယူနိုင်ပါတယ်
Posted by shwenadi at 7:27 PM 1 comment:
Labels: ကိုယ်တိုင်ရေး Software များ
Shwenadi web app v3.0 (new)
Shwenadi web app အား v3.0 အဖြစ် Shwenadi Technology မှ အသစ်ထပ်မံထုတ်လိုက်ပါပီ။ website နဲ. fb page ပေါင်း 50 ဖြင့်ပြန်လည်ရေးသားထားခြင်းဖြစ်သည်။ ယခင်ဗားရှင်း v2.0 ထက် website and fb page အခု၂၀ ထက်တိုးထားခြင်းဖြစ်သည်။offline ပိုစ့်တွေဖတ်လို.ရတော့ ဘေလ်ကုန်သက်သာတာပေ့ါနော် ဖိုင်ဆိုဒ်က 2mb ကျော်ကျော်လေးပဲ ရှိပါတယ်။ အသုံးပြုချင်တဲ့မိတ်ဆွေတွေအောက်ကလင့်မှာ ရယူနိုင်ပါတယ် ခင်ဗျ
Posted by shwenadi at 3:39 AM No comments:
Labels: Android applications, ကိုယ်တိုင်ရေး Software များ
မွန်သခဗ်ဟဒီစ်း apk (new) (for only islam)
Shwenadi technology ကထပ်မံထုတ်လုပ်ထားတဲ့ မွန်သခဗ်ဟဒီစ်း apk လေးပါ။ မွန်သခဗ်ဟဒီစ်းကျမ်းထဲက ဟဒီစ်းတွေကို တစ်ရက်ကို နည်းနည်းစီတင်ပေးသွားမှာပါ။ ဒီ apk လေးကို သွင်းထားခြင်းအားဖြင့် ဟဒီစ်းတွေကို ဖုန်းထဲကနေ Data ခဏဖွင့်ရုံဖြင့် ပိုစ့်အသစ်များကို update လုပ်ပီးလွယ်ကူစွာဖတ်ရှူ.နိုင်မှာပါ။နေ.စဉ်နေ.တိုင်း update ဖြစ်နေမှာပါ။ အင်ရှာအလ္လာဟ် အိလင်(သာသနာ့အသိပညာ)တိုးပွားစေဖို.ရည်ရွယ်ပါတယ်။လိုချင်တဲ့ မိတ်ဆွေတွေ ဒေါင်းလော့ရယူပီး လွယ်ကူစွာအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
Posted by shwenadi at 3:32 AM 1 comment:
Sulfur’s Keyboard V1.0.12 မြန်မာကီးဘုတ် For Android
Android အတွက် စာရိုက်လို့အရမ်းကောင်းမွန်တဲ့ မြန်မာကီးဘုတ် အသစ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ် ။
( ကိစ္စ ) ဆိုပြီး စာလုံး2လုံးဆင့်ရိုက်လိုပါက ကိုယ်လိုချင်သော( စ ) ကို ဖိထားလိုက်ပါ စလုံးနှင့်သက်ဆိုင်သော စာများထွက်လာပါလိမ့်မည် ။
ကီးဘုတ်မှာ သင် Eng – MM လက်ကွက်ပြောင်းလိုပါက Space Bar ကို ဘယ်ညာ ပွတ်ဆွဲ၍ပြောင်းလဲနိူင်ပါတယ် ။
Keyboard Theme မှာ မိမိကြိုက်ရာ ကီးဘုတ်ဒီဇိုင်းအရောင်ကို ရွေးချယ်ပြီးအသုံးဖြုနိူင်ပါတယ်
ကီးဘုတ်အတွက် အကို SoeMinnMinn and Djjoe Man (MMF) အား Credit ပေးရင်း ကျေးဇူးအရမ်းတင်ပါတယ် ။အားလုံးပဲ အဆင်ပြေကြပါစေ….
Posted by shwenadi at 4:23 AM 1 comment:
Wireless Connection တစ်ခုလုံးက Internet Speed ကို မိမိတစ်ယောက်တည်းလိုင်းပိုကောင်းအောင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ ?
1) Right Click on Computer > Device Manager
2) Scroll down, expand the Network Adapters list, and Double Click your WiFi Adapter.
3) Then Click Advanced tab to show all available modifications.
4) Select the property called Speed & Duplex and change the Value from Auto Negotiation to 1.0 Gbps Full Duplex
5) Click Ok to Apply all settings, you may also need to restart the computer.
credit--- MMIT Helper
Posted by shwenadi at 4:10 AM No comments:
Labels: computer knowledges
အသစ်တင်သမျှအား facebook ပေါ်မှ သိရှိရန် Like လုပ်ခဲ့ပေးပါ။
Android applications (176)
Android firmwares (3)
Android knowledges (62)
Android rooting (9)
computer knowledges (50)
computer softwares (61)
Computer Windows (2)
downloaders for computer (9)
IOS knowledges (6)
printer knowledges (2)
share links (5)
technology books (21)
ကိုယ်တိုင်ရေး Software များ (3)
နည်းပညာသတင်းများ(daily update) (28)
Dota သမားများအတွက် Myanmar Dota WarKey Version 1.0 Beta ပါ။(For computer)
Dota Games သမားများအတွက် စက်တိုင်းနဲ့ကိုက်ညီတဲ့ WarKey လေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်..အခုမှ Dota စခုတ်နေတဲ့သူများကို ရှင်းပြရမယ်ဆိုရင် WarKey ဆိုတာ...
icon changer softwareလေးပါ။
icon changer ဆိုတဲ့ icon change တဲ့ဆော့ဝဲလေးပါ သုံးရတာလည်း လွယ်မှလွယ် ပြောင်းချင်တဲ့ icon လေးပေါ် right click ထောက်ပီး change icon ဆိုတာကို န...
2D ဗွီဒီယိုဖိုင်တွေကို 3D ဗွီဒီယိုဖိုင်ဖြစ်အောင် ပြောင်းပီးကြည့်ရအောင် နှင့် 3d မျက်မှန်လုပ်နည်း(for computer)
ကျွန်တော့်တို့မြင်တွေနေကျ 2D ဗွီဒီယိုဖိုင်တွေကို 3D ဖြစ်အောင် ပြောင်းလဲပေးမယ့် ဆော့ဝဲလေးဖြစ်ပါတယ် 2D to 3D 3D to 2D 3D to 3D ...
1000kyats ပေးရတဲ့ Frozen keyboard ကို free သုံးလို.ရပါပီ (for android)
1000kyats ပေးသုံးရတဲ့နောက်ဆုံးထွက် Frozen keyboard ကို crack ထားတာပါ ။ ၁၀၀၀ကျပ်ပေးပီး ၀ယ်စရာမလိုတော့ဘူးပေါ့ :P ကျွန်တော်လုပ်တာတော့မဟုတ်ဘူးနေ...
sm3 word finder လေးပါ။(for android)
sm3 အင်္ဂလိပ် မြန်မာ အဘိဓာန်လေးပါ။တော်တော်မိုက်ပါတယ်။အခြား အဘိဓာန်တွေ နဲ. စာရင် သူ.အားသာချက်က ဖရီးမရပါဘူး ဟုတ်ပါတယ် အပြင်ဆိုင်တွေမှာ ဖရီးမပေး...
Android ဖုန်း/Tablet တွေပေါ်မှာ PSP game တွေဆော့လို့ ရပီနော်(for android)
ဘယ်လိုပြောရမလဲ ဗဲရီးဂွတ်ပေါ့......နော့ :D ။တကယ်ဆော့လို့ ရတယ်နော်။ ကိုယ့်ဖုန်းရဲ့ROM ပေါ်မူတည်ပီး အနှေးနဲ့ အမြန်ဆော့လို့ ရပါတယ်။S2 နဲ့ ...
Shwenadi web app အား v3.0 အဖြစ် Shwenadi Technology မှ အသစ်ထပ်မံထုတ်လိုက်ပါပီ။ website နဲ. fb page ပေါင်း 50 ဖြင့်ပြန်လည်ရေးသားထားခြင်းဖြစ...
Android os အတွက် ဗေဒင်application များစုစည်းခြင်း(for android)
Myanmar Mobile User Group မှကူးယူဖော်ပြခြင်းဖြစ်သည်။ Android အတွက် ဗေဒင်ဆော့ဝဲလေးတွေကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ မဟာဘုတ် ttp://db.tt/cLp9dDni ...
Website ပေါင်း ၁၃၄ ခုဖြင့် ရေးဆွဲထားသော shwenadi web link collection for computer ဟာ ကိုယ်လိုချင်တဲ့ ဆိုဒ်တွေရဲ့နာမည်ကို ကလစ်တချက်နှိပ်ရ...
မလေး - မြန်မာ အဘိဓာန် (for android)
မလေးရှားက မြန်မာတွေအတွက် အသုံးဝင်တဲ့ မလေးဘာသာပြန် APK လာပြီနော် .... ဆွဲထားကြ ..... မလေးဘာသာစကားတွေကို ဖုန်းထဲကနေ နေ့စဉ် လေ့လာလို့ ရပါ...